မွေးကင်းစနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘများ | လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့တွေ့မယ် ဒီ diaper ကိတ်မုန့်လုပ်နည်း. ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ကလေးရလာသောအခါ သို့မဟုတ် ပေးတော့မည့်အချိန်တွင် ပေးဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုမှာ မတူညီသော အရာဝတ္ထုများဖြင့် နှီးကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ရောင်စုံ၊ အသုံးဝင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ diaper cake ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ diaper cake ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ
အနှီး၊ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိတ်မုန့်ပေးမယ့်အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အရွယ်အစားကို ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
အဝတ်အစား၊ ကော်လံ၊ လိမ်းဆေး၊ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ကြိုက်တာရွေးပါ။ ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အရောင်များပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာများဖြစ်ပါက ခြင်းတောင်း၏နောက်ဆုံးရလဒ်သည် များစွာပိုကောင်းလာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ခြင်းတောင်း၊ ကတ်ထူပုံးအခြေ (နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ၎င်းကိုအလှဆင်ခြင်းမပြုပါက၊ အလှဆင်အဖြစ်ထုပ်ပိုးထားသောစက္ကူကိုထည့်နိုင်သည်။
သိုးမွှေးကြိုး သို့မဟုတ် ကြိုး သို့မဟုတ် အနှီးများကို ပြုပြင်ရန် ဆင်တူသည်။
lasso, ကြိုး, etc. စက္ကူကိုချည်နှောင်ရန်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်မည့်အရာအားလုံး၏စျေးနှုန်းကိုဖယ်ရှားပါ။ တောင်းအတွင်းပိုင်း။ စတိုးဆိုင်တွင် တစ်ခုခုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါက ၎င်းကိုမပြုလုပ်ပါက ပိုကောင်းသော်လည်း တံဆိပ်များကို လိုချင်ပါက ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အနှီးတွေ အကုန်ထုတ်ပြီး အရင်းကို ယူမယ်။ ငါတို့ကိတ်မုန့် (တောင်း၊ သေတ္တာ…)။ အောက်ခြေက အပေါ်နားလေးမှာ diaper bag ကို ခေါက်ထားလို့ မိဘတွေက လိုချင်ရင် ကြိုးနဲ့ ကြိုးနဲ့ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းထားလို့ရတယ်။ အိတ်နှင့် ကြိုးကွင်းများကို ဖုံးအုပ်ရန် အပေါ်မှ အပြားပြားလေးများ ထားပါမည်။
ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ သိုးမွှေးတစ်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ကြိုးဖြောင့်ကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး လိပ်ထားတဲ့ အနှီးတွေကို အပေါ်ထပ်မှာ တင်မယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်း။ အနှီးများ မလှိမ့်စေရန် ကြိုးဖြင့် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤအဆင့်သည် အရေးကြီးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိတ်မုန့်အတွက် ပထမဆုံး အနှီးကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိတ်မုန့်၏ခြေရင်းတွင် အနှီးအဝိုင်းကို တင်ကာ အနှီးများကို ဆက်လက်ထည့်ပါမည်။ အောက်ခံမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ကောင်းစွာပြည့်သွားသည်အထိ လှိမ့်ပေးပါ။ ထိုအချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမထပ်ကို ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးကိုချည်ပါမည်။ အနှီး အဆင့်များစွာရှိသော ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို လိုချင်ပါက၊ ဤအဆင့်ကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရန် လိုအပ်သော်လည်း သေးငယ်သော စက်ဝိုင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးတာနဲ့ ငါတို့မှာ အနှီးတွေ ရှိတယ်။ အခြားအရာဝတ္ထုများကို စီစဉ်ပေးပါမည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို အနည်းငယ်မြင်နိုင်စေရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းတို့ကို လှပသပ်ရပ်အောင် ဗျူဟာမြောက်ထားပါမည်။ တံဆိပ်များအားလုံးကို ဖျောက်ရန် ကြိုးစားပါ။
ရလဒ်ကို ကျေနပ်တဲ့အခါ၊ အချိန်တန်ပါပြီ။ ငါတို့ကိတ်မုန့်ထုပ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိတ်မုန့်အောက်တွင် အကြည်စာရွက်ကို ကျောဘက်နှင့် အရှေ့အတွက် အရှည်ဆုံးနှစ်ဖက်ချန်ထားပါမည်။ ဤရှည်လျားသောအခြမ်းနှစ်ခုကို ယူလာပြီး ထိပ်တွင် ချည်ထားသည်။
ထို့နောက် နှစ်ဖက်ပိတ်ပါမယ်။ သူတို့ကို ပေါင်းပြီး ပိုလျှံနေတဲ့ ကိတ်မုန့်ခြေရင်းကို ခေါက်ပြီး မမြင်ရအောင် ခေါက်ပါ။ ဇွဲနဲ့ ပြင်ပေးမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဤနေရာတွင် နောက်ထပ် ကိတ်မုန့်ရွေးချယ်ခွင့်ကို ထားခဲ့သည်- ကလေးတစ် ဦး ကိုမူလနည်းလမ်းဖြင့်ထုပ်ခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘများကို ပေးရန်အတွက် တောင်း သို့မဟုတ် အနှီးကိတ်မုန့်